वित्तीय साक्षरता – Page2– Banking Khabar
लघुवित्त वित्तीय संस्था के हो ? जान्नुहोस् विस्तृतमा
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गकोे इजाजतपत्र लिएर काम गरेका संस्थाहरु नै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु हुन् । लघुवित्त भनेको थोरै आय आर्जन भएका वा प्रचलित बैंकहरुसम्म प्रत्यक्ष पहुँच नभएका व्यक्तिहरुप्रति लक्षित वित्तीय सेवा हो । लघुवित्त विकास बैंकहरु …
बैंकास्योरेन्स के हो ? किन छ यसको महत्व ?
बैंकिङ खबर । सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा बैंकास्योरेन्स भनेको कुनै पनि इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रोडक्ट बैंकमार्फत विक्री गर्नु हो । यसका लागि कुनै पनि बैंक र इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच पहिले सम्झौता हुन्छ । सम्झौता पश्चात्, बैंकले उक्त बीमा कम्पनीको प्रोडक्स ग्राहकहरुलाई विक्री गर्ने …
जनप्रतिनिधिमा वित्तीय चेतनाको अभाव : वित्तीय पहुँच वृद्धिमा चुनौती
सुष्मा थापा/बैंकिङ खबर । मुलुक संघीयतामा गईसकेको छ । संघीय संरचना अनुसार सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह कायम भएका छन् । प्रदेश, स्थानीय र केन्द्रीय सरकारको निर्वाचन समेत भइसकेको छ । संघीय बजेट आइसकेको छ । तर, संरचनागत आधारमा …
बैंकका कर्मचारीमा कस्ता गुण हुनुपर्छ ? हेर्नुहोस् नौ बुँदामा
राम किशोर मेहता । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न चाहने तथा काम गरिरहेको कर्मचारीहरुमा अन्य संस्था तथा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरु भन्दा केही फरक तथा केहि विषेश गुणहरु आवश्यक पर्दछ । अन्य क्षेत्र भन्दा बढी पारदर्शीता तथा लगाव चाहिने यस …
बिम्सटेक के हो ? यसको उद्देश्य के हो ?
बैंकिङ खबर । बिम्सटेकको पूरा रुप बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास हो । यसमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, म्यानमार र थाइल्यान्ड गरी सात सदस्य रहेका छन् । विम्सटेकको स्थापना ६ जुन, १९९७ मा भएको थियो …
वित्तीय व्यबस्थापन गर्ने सरल नौ टिप्सहरु
बैंकिङ खबर । परिवारको वित्तीय सबलतामा नकारात्मक प्रभाव पर्नु भनेको कुनै–कुनै तरिकाले राष्ट्रलाई नै असर पर्दै जानु हो । वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञान पनि वित्तीय साक्षरताको अर्को उद्देश्य हो । कसरी वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने । स्रोत कहाँबाट जुटाउने, कहाँ लगानी गर्ने, …
बैंकिङ फिसिङ कसरी हुन्छ ? जोगिने उपाय के के ?
बैंकिङ खबर । तपाईको इमेलमा कहिलेकाँही विभिन्न प्रलोभनसहित लिंकहरु पठाइएको हुनसक्छ । त्यहाँ तपाईले कुनै बम्पर पुरस्कार पाउनुहुने भएको, लक्की ड्रमा नाम परेको वा कुनै देशको भिसा लागेको भनि इमेलसहित लिंक पठाइएको हुन्छ । कहिलेकाँही तपाईलाई अज्ञात नम्बरबाट मेसेज पनि आउन …
बैंकिङ खबर । बैंकमा जागीर खान चाहानुहुन्छ भने तपाईँले आफूलाई सोही अनुसार तयार राख्नुपर्ने हुन्छ । किनकि, तपाईँसँगै सोही जागीरका लागि अन्य थुप्रैले एप्लाई गरेका हुन्छन् । कयौँमध्येबाट छनौट गरेर तपाईँलाई नै किन राख्ने त ? यसका लागि तपाईँसँग अरुमा नभएको …
बैंकिङ खबर । बीमा व्यवसाय जोखिमहरुलाई व्यवस्थापन गरी आर्थिक भार वितरण गर्ने प्रणालीयुक्त व्यवसाय हो । बिमक विमितबाट पेस भएको बीमा प्रस्तावहरुको स्वीकार गरेर बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दछ । बिमकले विभिन्न करार बमोजिम (बीमालेख बमोजिम) सकारेको जोखिमको भार आफ्नो आर्थिक …
बीमा अभिकर्ता भनेको के हो ? केके काम गर्छन् ?
बैंकिङ खबर । मौद्रिक प्रणाली मार्फत केन्द्रीय बैंकले देशको स्टिक मार्केट लाई र ब्याजदरलाई असर पार्दछ । यसको साथै राष्ट्रको समग्र वस्तु तथा सेवा बजारमा माग तथा आपुर्तिमा समेत असर गर्दछ । यसबाट राष्ट्रको आय तथा आर्थिक प्रणलीलाई उपयुक्त व्यवस्थापन …
किन र कसरी भर्ने ‘केवाईसी’ फर्म ? केके चाहिन्छ कागजात ?
बैंकिङ खबर । हाम्रो कामको आर्थिक आम्दानी भनेको नै मुद्रा हो । नेपाल सरकारले वा नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्काशन गरेको नोट, मोहर, रुपैयाँ, रेचकी वा पैसा नेपाली मुद्रा हुने भनी नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४ को दफा २ …
नेपालमा खुला बैंकिङ अवधारणाको सुरुवात र विकासक्रम
सन् २००४ मा २०६० माघ २१ गते बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश, २०६० स्वीकृत भई लागु गरिएको थियो । समग्र राष्ट्र जनप्रतिनिधि विहिन भएको अवस्थामा तत्काल अपठ्यारो फुकाउनका लागि तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७२ बमोजिम यो …